Ny hydroponics any an-trano - volo
Fantatrao ve fa afaka manangona hariry isan-taona ao an-trano ianao indray mandeha, rehefa nanandrana namorona hydroponics ianao? Raha mitombo haingam-pitaratra amin'ny hydroponics ianao ao amin'ny trano iray raha tsy amin'ny filàn'ny fianakavianao, dia hanana toerana kely ihany ny fametrahana azy. Mba hanamboarana zavamaniry hydroponika amin'ny fitomboan'ny ahitra, mila vola kely ianao. Ary ny efitrano fisakafoana dia mila sakafo, hafanana (efitra fisakafoanana) ary loharanom-pahalalana ho an'ny fitomboana.
Ho an'ny mpamboly maro efa za-draharaha, dia tsy takatry ny fambolena ny fambolena amin'ny fomba fiasan'ny hydroponics. Amin'ny tenan'izy ireo, ny fanontaniana dia mitranga, ahoana no ahitan'io menavava io avy ao amin'ny tany, na izany aza, tsy ao anaty rano irery ihany? Ary mieritreritra ihany koa izy ireo fa ny parsley toy izany dia ambany noho ny legioma amin'ny habetsan'ny vitamina sy ny singa marindrano, milaza hoe, avy aiza avy any anaty rano izy ireo? Saingy raha ny marina dia mitombo avo roa heny ny tombom-barotra mitombo avo be ao amin'ny zaridaina sy parsley. Raha mitombo avy amin'ny orinasa hydroponic ny voly, dia tsy ilaina ny manahy mikasika ny bibikely sy ny aretina voajanahary. Ary koa, tsy ilaina ny mihinana sy mametraka ny mineraly ao anaty tany. Raha momba ny fisian'ny voankazo rehetra ao anaty ranomandry, ny vitamina sy microminerals ao aminy dia ho eo amin'ny habeny mahazatra, raha manaraka ny fitsipika rehetra. Noho ny zavamaniry dia hitombo ao anatin'ny tontolon'ny toetr'andro iray izay tsy misy akory ny zavamananaina, avy eo dia hampiroboroboana ny ahi-maitso ary hahasoa kokoa. Ary hahazo fijinjana mialoha sy amin'ny volavolam-bidy kokoa ianao. Raha mitombo toy izany, dia tsy hisy zavatra mampidi-doza ny voly, satria matetika izy ireo no latsaka ao amin'ny zavamaniry avy amin'ny tany. Amin'ity tranga ity, ny toeram-pambolena dia tsy ahitana afa-tsy ireo akora izay nataonao. Andeha isika hianatra bebe kokoa momba ny teknolojia amin'ny fitomboan'ny ahitra amin'ny hydroponics.
Raha ny marina, ny fakan-dàlana dia tsy hita amin'ny rano ao amin'ny orinasa hydroponic. Ho an'ny fitomboan'ny fotodrafitrasa dia ilaina ny mampiditra fotodrafitrasa artificiel ao anaty efitrano miaraka amin'ny rano. Azo atao toy ny mineraly madinika vita amin'ny vericulite, manitatra ny tanimanga, fasiana lava lava na volon'ondry mineraly. Ho an'ny fitomboana ara-dalàna sy ny fikarakarana ny zavamaniry dia ilaina ny mampiditra ny menaka mahavelona ao anaty rano, izay matetika no vita amin'ny molekiolan'ny mineraly sy organika. Tsy hanolotra orinasam-pitaterana lafo vidy izahay. Mba hiantohana ny filànao ara-pahasalamana dia ampy ary ny fitaovana tsotra indrindra. Ny hevi-dehibe amin'ity dingana ity dia ny fandefasana rano. Mba hanomezana izany, mila paompy kely izahay, tapa-tavoahangy misy metaly-plastika ary tanks roa. Eo amin'ny voalohany, ny rano dia hilefa foana ao anaty fitoeran-drano faharoa, izay avo kokoa. Ary io rano io tsy mandatsaka ny sisiny, manolotra vahaolana tsotra. Ny iray amin'ny tavoahangy dia mandentika ny taratasy U mba tsy hahatratra dimy santimetatra ny biriky mankany amin'ny sisin'ny vatoaratra ambony. Ny iray amin'ireo tendrony dia tokony ho lava kokoa ary hidina amin'ny ambany ambany, ary ny faharoa dia tokony hapetraka eo ambany faritry ny fitoeran-drano. Ny fivoahan'ny rano eto dia miseho araka ny fitsipiky ny siphon. raha vao Ny haavon'ny rano ao amin'ny tanky ambony dia hahatratra ny biriky ny tavoahangy, dia hipoitra avy ao amin'ny taratasy U ny tohodran-drivotry ny rivotra, ary ny rano dia hiondrana any ambany. Avy eo dia manindry ny tank lehibe indray ny pne, ary haverina ilay dingana. Ary ny ranon-javatra dia hampiaraka haingana kokoa noho ny fanipazana kapila. Ao amin'ny tanky ambony dia manolo-kevitra ny hameno ny volon'ondry sy vericulite mineraly. Ary efa nambolena mivantana ny zavamaniry.
Eto amin'ny fomba tsotra dia ahafahanao mamolavola volom-boly vaovao mandritra ny taona ianao!
Ny fomba hydroponic dia afaka mampitombo ny zavamaniry samihafa, anisan'izany ny tongolobe sy ny trondro .
Ahoana no tokony hambolena tulip?
Ahoana no hambolena rose avy amin'ny fehezam-boninkazo?
Fambolena dipoavatra ao anaty trano fandroana - fanolorana sy fanamafisana ny fitomboana mahomby
Tazo ravina mihodina
Famokarana raozy amin'ny lohataona
Ahoana no ahafahana mamorona ny satroboninahitry ny aviavin'i Benjamina?
Ny saosisy vita amin'ny leviora dia tsara sy ratsy
Photosession "Ny maraina ny ampakarina"
Lakes of the Republic of the Czech Republic
Ahoana ny handrahoan'ny tongotra tongolo?
Firaisana tsy mahazatra
Afaka ny pastèque rehefa tsy mitaky mavesatra na tsia?
Ahoana ny fomba ahandroana kalamari mena?
Miaraka amin'ny sipany i Chris Jenner, saingy tsy manam-potoana hialana voly izy ...
TOP-10 mahasoa indrindra ho an'ny vehivavy bevohoka
Forshmack amin'ny teny Hebreo - recipe
Ahoana no hamaritra ny fizotry ny foetus amin'ny tenanao?
Pamela Anderson nanoratra taratasy fitiavana ho an'ilay mpanorina ny WikiLeaks Julian Assange
Fanomezana ankizivavy telo taona